Airbus iji kwalite nkwukọrịta ókè-ala n'etiti mba GCC
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Airbus iji kwalite nkwukọrịta ókè-ala n'etiti mba GCC
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • investments • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE
Ihe akaebe nke nkwekọrịta (PoC) ga -enye Airbus ohere inwale njikọ nke netwọkụ nchekwa nchekwa ọha na, na n'etiti ókèala mba Gulf abụọ.
Airbus na -arụ ọrụ iji kwado ebumnuche mgbanwe dijitalụ nke GCC.
General Secretary nke Council Cooperation Council (GCC) na Airbus bịanyere aka n'akwụkwọ Nkwekọrịta.
Airbus na-ewepụta atụmatụ zuru ezu iji lebara ozi niile anya na mkpa dị mkpa nke ahịa GCC.
Onye odeakwụkwọ ukwu nke Council Cooperation Council (GCC) na Airbus bịanyere aka na Memorandum of Understanding (MoU) n'oge na -aga n'ihu. Ihe ngosi 2020 Dubai iji kwalite nhazi na nkwukọrịta nchekwa oke-ala n'etiti mba GCC, na-amalite site na mmejuputa “ngosipụta echiche” mbụ n'etiti mmadụ abụọ n'ime ndị otu ahụ.
Ihe akaebe nke nkwekọrịta (PoC), bịanyere aka na 3 Ọktoba na ngosi ihe ngosi GCC na Expo, ga -enye ohere Airbus iji nwalee njikọta netwọkụ dị oke egwu na nchekwa, na n'etiti ókèala mba Gulf abụọ.
Maj. Gen. Hazaa Ben Mbarek El Hajri, onye odeakwụkwọ enyemaka nke ihe gbasara nchekwa, odeakwụkwọ izugbe nke Council Cooperation Council, na Selim Bouri, onye isi Middle East, Africa na Asia Pacific maka nkwekọrịta nkwukọrịta ala na Airbus bịanyere aka na ya.
"Anyị ga-eji Inter-System Interface jikọọ netwọkụ mmekọrịta abụọ dị oke mkpa ma meghee ụzọ maka ịdị mma, ngwa ngwa, na imekọ ihe ọnụ dị mma n'etiti ndị nchekwa oke ala sitere na mba GCC. Anyị ga-ejikwa atụmatụ nke Tetra anyị nke oge a iji mee ka nkwukọrịta gafere ókè n'etiti ụlọ ọrụ nchekwa ọha, nke dị oke mkpa n'oge anyị na-eche ọtụtụ nsogbu nchekwa oke. N'okpuru nkwekọrịta POC anyị, ndị otu ọkachamara anyị ga -anwale akụkụ ọrụ aka na arụmọrụ nke mbọ a ka ha na -ebuga ọkwa nnweta, nzuzo na nchekwa kachasị elu nke anyị na -enye. Anyị nabatara mmekorita anyị na odeakwụkwọ ukwu nke GCC ma anyị na -ekele ha maka ntụkwasị obi ha na teknụzụ anyị. ” Selim Bouri, onye isi Middle East, Africa na Asia Pacific maka nkwukọrịta ala echekwara na Airbus kọwara.
"Airbus na -agba mbọ ịkwado ebumnuche mgbanwe dijitalụ nke GCC. Anyị na-azụlite atụmatụ zuru ezu iji lebara ozi niile anya yana mkpa dị mkpa maka ahịa GCC site na iwulite nkwukọrịta echekwara na enweghị njikọ na netwọ mmekọrịta. MoU ọhụrụ a bụ ihe akaebe maka nkwa a, "Bouri kwukwara.